wararka maanta-arlaadii.net » MAXAA KEENAY in Shariif Xasan iyo Cabdikariin Guuleed ku midooban Musharaxnimada afhayeenka Baarlamaanka Cabdirashiid Xidig.
MAXAA KEENAY in Shariif Xasan iyo Cabdikariin Guuleed ku midooban Musharaxnimada afhayeenka Baarlamaanka Cabdirashiid Xidig.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug maalmo ka hor ku kulmeen Magaalada Nairobi isla markaana maalintii shalay oo Arbaco ahayd ku soo laabtan Magaalada Muqdisho iyagoo soo gaaray heshiis iskaashi ama isbaheysi siyaasadeed ah kaas oo dhamaad iyo bilow u ah doorashada dadban ee ka socota soomaaliya.
GUULEED iyo SHARIIF XASAN ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha doorashada intii ay joogan Nairobi, waxayna ku heshiiyan in Cabdirashiid Xidig laga dhigo afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya, Xildhibaanada labada Maamul Goboleed ka yimid codka siiyan.
Marka saamiga beesha Daarood la siiyo Cabdirashiid Xidig loona doorto afhayeenka Baarlamaanka, waxaa meesha ka baxaya ayaa ah hamigii Siyaasiyiinta daarood Madaxweyne ama Ra´iisal Wasaare ku doonayan.
Marka Shariif Xasan iyo Guuleed waxay ku heshiiyan inay kala keensadan dad iyaga ku xiran oo kala ah Madaxweyne iyo Ra´iisal Wasaare.
SHARIIF XASAN isaga ayaa isku soo sharaxay jagada madaxweynaha soomaaliya balse haddii heshiiskan dhaqan galo waa uu ka tanaasulayaa musharaxnimadiisa wuxuuna keensanaya qof looga dhigo Ra´iisal Wasaare halka Cabdikariin Guuleed keensan doono shaqsi uu la rabo in Madaxweynaha soomaaliya loo doorto.
Heshiiskan ka dhacay Magaalada Nairobi waxaa uu halis ku yahay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud, maadama Guuleed iyo Shariif Xasan Xildhibaanada taageersan qorshe kale lo weecinayo.
Guuleed naftiisa ayaa sheegay inuu ka daalay Madaxweyne hal beel ka soo jeedo loona baahan yahay is bedel taas oo loo fahamay in uu ula jeeday Beesha Madaxweyne Xasan Sheekh.
Isbadal ayaa hamuun loo qabaa, waa cusub inuu u baryo dadka soomaalited aad ayaa loo doonaya, ifafaale fiican ayaa muuqda, isku mowqif ayaa laga yahay sidii loo heli lahaa hogaan ka badalan midka haatan jooga, sidaas waxaa qaba dad badan oo Cabdikariin Guuleed ka mid yahay iyo Shariif Xasan .
Laakiin dad badan ayaa aaminsan in Siyaasiyiinta laga daalay uu ka mid yahay Shariif Xasan iyo Cabdikariin Guuleed, loona baahan yahay is bedel guud iyo wejiyo cusub in kastoo ay adag tahay in la helo hogaamiyaal ku cusub bulshada maadama labada aqal ku yimaadan musuq maasuq iyo gacan qabasho.
DEG DEG Qarax ka dhacay meel u dhow Tiyaaatarka magaalada Muqdisho
AQRISO: Qoraal Usoo Saaray Michael Keating oo looga dalbaday inay soo cadeeyan guddiga xalinta khilaafaadka 13 kursi oo si weyn la isugu haystay iyo sababta 11 kursi keliya go’aan looga soo saaray